"နိုင်ငံကြီးသား"ဇာတ်ကား မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ သရုပ်ဆောင် အဆိုတော်မင်း မော်ကွန်းနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း - Yangon Media Group
“နိုင်ငံကြီးသား”ဇာတ်ကား မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ သရုပ်ဆောင် အဆိုတော်မင်း မော်ကွန်းနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
“နိုင်ငံကြီးသား”ဇာတ်ကား မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ သရုပ်ဆောင် အဆိုတော်မင်း မော်ကွန်းနဲ့ အခုလိုတွေ့ဆုံမေး မြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မေး – “နိုင်ငံကြီးသား ” ဇာတ်ကား မှာက သရုပ်ဆောင်အင်အား တော်တော်များတယ်နော်။
ဖြေ – သရုပ်ဆောင်တွေများပေ မယ့် ကျွန်တော်တို့သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဆုံတဲ့ အခန်းနည်းပါတယ်။ သူ့ကဏ္ဍနဲ့ သူရိုက်ကြတယ်။ ဒီဇာတ်ကားထဲ မှာ အဓိကဆုံဖြစ်တဲ့ သုံးယောက်က တော့ ကျွန်တော်ရယ်၊ နေရဲ၊ မင်း သွေး အဲဒီသုံးယောက်ကတော့တွဲ ပြီးသရုပ်ဆောင်ရတာများပါတယ်။
မေး – ဒီဇာတ်ကားရဲ့ ဇာတ်လမ်း ကိုရော ဘယ်လိုမြင်မိလဲ။
ဖြေ – ဒါကတော့ ခေတ်စနစ် တစ်ခုရဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေကို ဖော်ပြတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားလို့ မြင်ပါတယ်။
မေး – ဒါရိုက်တာစတီးလ်နဲ့ ရိုက် ကူးရတာရော ဘယ်လိုရှိလဲ။
ဖြေ – ကိုစတီးလ်နဲ့ ကျွန်တော် တို့ လက်တွဲပြီးရိုက်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကား တွေလည်းရှိသင့်သလောက်ရှိခဲ့ပြီ ဆိုတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နားလည်မှုရှိတယ်။ သူဘယ်လို လိုချင်လဲ၊ ဘယ်လိုအိုက်တင်တွေ ကြိုက်တတ်လဲ၊ သူခိုင်းပြီဆို ကျွန် တော်က ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ မျိုးကို သိတာကြောင့်အလုပ်လုပ် ရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။
မေး – ]နိုင်ငံကြီးသား}ဇာတ်ကား ရိုက်ကွင်းတုန်းက ကားတိုက်မိတယ် ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်း ပြော ပြပေးပါဦး။
ဖြေ – အဲဒီဟာက ရိုက်ကူးနေ ရင်းနဲ့ ဘေးမှာရိုက်တဲ့ အဖွဲ့တွေရှိ တယ်။ အလယ်မှာက ကျွန်တော် တို့သုံးယောက်ထိုင်နေတဲ့ ကားရှိ တယ်။ အဲဒီမှာ အနောက်ကလာတဲ့ ကားက ဘေးကရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့ ကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော်တို့ကားကို မမြင်ဘဲ နောက်ကဝင်တိုက်လိုက် တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာမှတော့ ဖြစ် သွားဘူး။ ကားနှစ်စီးကတော့ တော်တော်ပျက်စီးသွားပါတယ်။
မေး – အတူတူ တွဲဖက်သရုပ် ဆောင်ခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသွေး နဲ့ရော ဘယ်လိုအမှတ်တရတွေရှိ ခဲ့လဲ။
ဖြေ – သတိလည်းရတယ်။ သူ့ ကိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်း အမြဲအမှတ်တရရှိပါတယ်။ ခုန ဇာတ်ကားထဲမှာ ကားတိုက်ခံရ တုန်းကဆိုရင်လည်း ကျွန်တော် ရယ် နေရဲရယ်က ကားရှေ့ခန်းမှာ မင်းသွေးက တစ်ယောက်တည်း နောက်ခန်းမှာရှိနေတော့ ဖြစ်ဖြစ် ချင်းမှာ ကျွန်တော်တော်တော်လေး စိတ်ပူသွားတယ်။ ကားကလည်း နောက်ကနေ အရှိန်များများနဲ့တိုက် တာဆိုတော့ စိတ်ပူခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အမှတ်တရပါပဲ။
မေး – ကိုယ့်သီချင်းရဲ့ MTV မှာ ကိုယ့်သားသမီးတွေကို ထည့်သွင်း သရုပ်ဆောင်ဖြစ်တာကရော။
ဖြေ – ကျွန်တော့်သီချင်း MTV မှာရိုက်တယ်ဆိုတာက အမှတ် တရအနေနဲ့ ရိုက်ဖြစ်တာပါ။ ကျွန် တော့်သီချင်းမှာ ကျွန်တော့်သား သမီးတွေကို အမှတ်တရအနေနဲ့ ထည့်ဖြစ်တာပါ။ သားနဲ့သမီးက တော့ အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင် တော့ဝါသနာပါတယ်။
မေး – လက်ရှိအနုပညာလှုပ်ရှား မှုကရော ဘာတွေလုပ်ဖြစ်နေလဲ။
ဖြေ – လက်ရှိကတော့ ကျွန် တော်ကားရိုက်တွေ လောလော ဆယ်နားထားပါတယ်။ ကြား ထဲမှာ သီချင်းလေးတွေလုပ် ဖြစ်နေပါတယ်။
မေး – ]နိုင်ငံကြီးသား}ဇာတ် ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ် တွေကို ပြောချင်ရှိမလား။
ဖြေ – ဒီဇာတ်ကားမျိုးက တော့ အရင်ခေတ်တွေတုန်းကရိုက်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အခုခေတ်မှရိုက်ခွင့်ရပြီး ရုံတင်ခွင့် ရတဲ့ဇာတ်ကားအမျိုးအစားမျိုး ပါ။ ပရိသတ်တွေလည်း အခုရုံ တင်နေပြီဆိုတော့ လာအားပေး ကြပါဦးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဝေဖန်မှုများကြောင့် The HuntSection ရုပ်ရှင်ဖြန့်ချိမည့်အစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်း
အက်ဖ်အေဖလား ပွဲ၏ အစဉ်အလာနှင့် ဝီဂန်၏ခြေစွမ်းအပေါ် စိုးရိမ်မိဟု ဂွါဒီယိုလာ ဝန်ခံ၊ ဝီဂန်နှင်?
မန္တလေး ခုတင် (၅ဝဝ)ဆံ့ အရိုးအထူးကု ဆေးရုံကြီးတွင် ခြေခွင် ကလေးငယ်များအား အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့တို??